2022 ခုနှစ် ဧပြီလ 24 ရက်နေ့ ပြင်သစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲများ – JucelinoLuz
Emmanuel Macron သို့မဟုတ် Marine Le Pen
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားနေသည့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် ရှုမြင်ရာတွင်၊ Parapsychology ကိုအခြေခံ၍ သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံသော သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများ ဖြစ်သောကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေသည် ကျွန်ုပ်အား ဝိညာဉ်ရေးရာ သို့မဟုတ် ထူးခြားသောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့မျှ မထိခိုက်စေကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ 7% ခန့် (ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း) သည် သာလွန်ထူးခြားမှုအဆင့်ကို အကဲဖြတ်ရန် လုံလောက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး ၎င်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၎င်း၏ ခန့်မှန်းချက် 70% (ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း) ကို ထိမိသည့်အခါ မည်သို့ပြောရမည်ကို ဖော်ပြပါ။ လူတွေက သူတို့အတွက် အဆင်ပြေတဲ့အရာကို အမြဲရွေးချယ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အပြောင်းအလဲအတွက် အခွင့်အလမ်းအများဆုံးကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ ဒါက ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး – သူတို့အားလုံး (နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ယေဘုယျသဘောမထားဘဲ) ဟာ တူညီတဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရေးသမား၊ အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် Emmanuel Macron ၊ lam ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၏အဖွဲ့ဝင် 2006 မှ 2009 အထိရှိသည်။ ခြုံငုံကြည့်လျှင် Macron သည် ဗဟိုဝါဒီတစ်ဦးအဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး အချို့က သူ့ကို ဆိုရှယ်လစ်ဘရယ်ဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး အချို့က သူ့ကို ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ပြင်သစ်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း ၎င်းသည် မူဝါဒများကို “တတိယနည်းလမ်း” အဖြစ် ဖော်ပြသည့် လှုပ်ရှားမှု၏ ဗဟိုဝါဒီမှ ဘီလ်ကလင်တန်၊ တိုနီဘလဲနှင့် Gerhard Schröder ကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ဆက်စပ်လေ့ရှိသည့် အမြင်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကတော့ “ဘယ်ဘက်ကနေ”၊
( ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ သူတွေက နိုင်ငံနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ပြောခဲ့တယ် – ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့ ပြင်သစ်တွေ မဟုတ်ဘူး၊ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အငြင်းပွားမှုမှာ သူ့သဘောထားကို ပြောင်းခဲ့တယ်၊ သူက ချစ်ခင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောခဲ့တယ်! မြန်မြန်!)
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Marine Le Pen ဟုလူသိများသော Marion Anne Perrine Le Pen သည် ပြင်သစ်မှ လက်ယာစွန်းရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ဥရောပပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖခင်ဖြစ်သူ Jean-Marie Le Pen နေရာတွင် အစားထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားတပ်ဦး၏ သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည် 2010 ခုနှစ် မတ်လကတည်းက Nord-Pas-de-Calais အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအတွက် ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီဝင်ဖြစ်ပြီး Hénin-Beaumont ၏ 2008 ခုနှစ် မတ်လကတည်းက မြူနီစပါယ်ကောင်စီဝင်လည်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် “လက်ယာ”၊
“ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့် လူတွေက အပြောင်းအလဲကို ကြောက်ကြတယ်။ ပြောင်းလဲမှုသည် မသိခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် မသိသောအရာဖြစ်သည်။ သေချာပါတယ်၊ အဲဒါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အရာမို့လို့ လူဟာ နောင်လာမယ့် အရာကို မရှင်သန်သေးတဲ့အတွက် သံသယတွေ၊ မလုံခြုံမှုတွေနဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေက အပြောင်းအလဲအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ မကြာခဏ ခံစားချက်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အပြောင်းအလဲများကို hits နှင့် misses များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ “
ပရောဖက်ပြုချက်သည် ဘယ် သို့မဟုတ် ညာနှင့် မရောနှောပါ။ ဘောလုံးပွဲလိုတောင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး…။
ထင်ရှားသည်မှာ၊ ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အလင်းနှင့် တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းအတွက် အဖြေဖြစ်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးမှာ ရာထူးရယူရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ရာသီဥတုက မျှော်မှန်းချက်ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာ သဘာဝပါပဲ။
သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲသည် အမြဲတမ်း ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အခိုက်အတန့်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည်။
စွဲချက်များနှင့် ကွဲလွဲမှုများ ရှိသော်လည်း အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း မပြုကြောင်း ကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းလိုပါသည်။
ဗျာဒိတ်တော်များကို ဉာဏ်ဖြင့် အနက်ပြန်ဆိုရုံမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း၊
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဟောကိန်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် လူအများထံ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် ချန်နယ်တစ်ခု၊ (ပရောဖက်ပြုချက်များ) ဖြစ်သည်။
“သမိုင်း သို့မဟုတ် စစ်တုရင်ကစားနည်း” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေသည့် သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ကို ကောင်းစွာအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည့်၊ ဆိုးသွမ်းသောအင်အားစုများက သမိုင်းကို ခြယ်လှယ်ရန် ပေါင်းစပ်ကာ ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားများနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ၊ ကိစ္စအများစုတွင် ဆန္ဒများနှင့် မတိုက်ဆိုင်ဘဲ၊ ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များ- ပြင်သစ်လိုအပ်သောအရာမှာ နိုင်ငံရေးပြန်လည်ဆန်းသစ်ရေး၊ တရားမျှတမှု၌ သက်တမ်းတိုးခြင်းဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၊ ကျွန်ုပ်၏အသက် ၅၃ နှစ်တာအတွင်း ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက် ရည်စူးထားသော၊ ပြင်သစ်တွင်သာမက ပြင်သစ်တွင်သာမက နိုင်ငံတဝှမ်းမှ လူကောင်းများကိုသာ အခွင့်ကောင်းယူနေသော အာဏာပိုင်များနှင့် နိုင်ငံရေးကိုသာ ကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သည်။ ကတိများ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ လှည့်ဖြားမှုများနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့်၊ တရား၏အလင်းကို အသုံးပြုသူအချို့၊ တရားမျှတမှုတို့ကို ကျင့်သုံးသောအားဖြင့်၊ ထို့ကြောင့်၊ မဝေးတော့သော အနာဂတ်တွင် ပေါ်ထွက်နိုင်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် စွပ်စွဲမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ (မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ)၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တစ်စုံတစ်ရာ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ (ကျွန်တော်သည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင်မှ မပါဝင်ပါ၊ အားလုံးကို လေးစားပါသည်)၊ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ အလင်း​ရောင်​လမ်း​ကြောင်းကို ရှာ​ဖွေ​နေ​သော နိုင်ငံသားများအတွက်​ စိတ်​ဝိညာဉ်​လမ်းညွန်​ရာထူး​နေရာ၌ ထား​ပေးခဲ့သည်​ဖြစ်​​စေ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်​သည့်​အနာဂတ်​အတွက်​ သူတို့ဘဝအတွက်​ နှစ်​သိမ့်​မှု နှင့်​ဦးတည်​ချက်​ကို သိရှိနိုင်​သည်​၊ သံလိုက်​အိမ်​မြှောင်​၊ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအသစ်- ငါ့မှာ နိုင်ငံရေးရာထူးမရှိလို့၊ တကယ်တော့ တခြားသူတွေရဲ့ အမြတ်ထုတ်မှုကနေ အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေ၊ အလင်းလမ်းကို မရှာနိုင်ကြဘူး၊ အတ္တထဲမှာ ထာဝရရှင်သန်နေမယ်၊ အာဏာကိုရှာမယ်၊ တခါတရံ ပြန်မရသော အဆိုးစက်ဝိုင်း။
ပါမောက္ခ Jucelino Luz – အမြော်အမြင်ရှိသော၊ စာရေးဆရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဝိညာဉ်ရေးရာအကြံပေး
ပိုမိုလေ့လာရန်နှင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်၊ အောက်ပါလင့်ခ်များထဲမှ တစ်ခုကို နှိပ်ပါ။